Jidadkiisa oo dhammu waa inay Lugood wareejiyo Computer kale
Guuritaanka maktabadda Lugood aad ka mid computer si kale u muuqan karaan in ay howl culus aya hortaala. Tani waxa dhici karta in aad sidoo kale u dhaqaaqo MAC cusub ama kaliya bedesheen aad mashiinka oo aad u hagaagsan oo macruufka ama iPod aad. Geedi socodka socda oo ku saabsan kala iibsiga waxaa si fudud ku salaysan xoogaa tallaabooyin ah oo aad isticmaali karto si ay u gudbiyaan xogta aad. Waxaan idinku hanuunin doonaa dhowr talaabo oo sahlan oo ku saabsan sida ay u tagaan oo ku saabsan geedi socodkan.
Habka 1: Transfer Direct dhex kaaliyaha Socdaalka
Habka 2: beddelashada music Lugood in Computer kale la TunesGo
Habka 3: Transfer By gubanaya ah CD / DVD
Haddii aad u soo guurayso MAC ka MAC ah, bet ugu wanaagsan waa in la isticmaalo socdaalka kaaliyaha OS X ee. Kaaliyaha Arintan waxay u sahlaysaa in aad si toos ah u gudbiyaan xogta aad. Marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay riix "nidaamka la door" oo taga si ikhtiyaar ah ee "wadaagga." Jeedo in ikhtiyaarka ah ka dib "File qaybsiga."
Hadda bedesho MAC aad si wareejinta xogta aad. In ka badan halkan waxaad arki lahayd cinwaankaaga MACs jir muuqday qaybta la wadaago ee galeeysid Finder ah. Waxaa Dooro by siyoodba way dul guji Connect Sida.
Waxaad ku iman doona fool ka fool u la hadal calaamad-in a. Waxaad ku qortaa magacaaga user diiwaangashan iyo password, oo ka jaftaa xirmaan.
Hadda waxaad eegi kartaa icon Music on wada hadal ah taas oo muujinaysa habka file Macs jir ah. Waxaad jiidi karaan oo dhan folder Lugood inay isku meel ku cusub Mac
Tani waa hab kale oo ah in computer cusub wareejinta faylasha aad iyo gabaygayga iyadoo la kaashanayo software ah oo loo yaqaan Wondershare TunesGo. Waxaad si fudud u soo bixi kartaa software this ka dibna raac tallaabooyinka ku siiyey;
Nidaameed iyo wareejiyo maktabadda Lugood si aad u qalab Android aad
Ka dib markii la rakibey of this Lugood qalab kala iibsiga, aad u baahan tahay si aad u furto. Isla mar ahaantaana ku xidhi qalab dibadda Apple oo aad isticmaalayso lahaa kala iibsiga waa adiga iPhone, iPad, iPod ama. Software Tani waxay ogaan doonaan mid ka mid ah qalabka oo tus in aad ku furmo suuqa ugu weyn.
Copy Lugood in this qalab Apple dibadda
Waxaad u baahan tahay si ay u wad si aad u "playlist" khaanadda tagay. Tani waxay keenaysaa in aad fool ka fool leh set oo ah fursadaha dhinaca midig. Tubada on the "Add" doorasho, taas furi doonaa dhibic hoos menu. Dhamaan playlists loo baari doonaa si toos ah, laakiin aad fursad u haysataa ee unchecking haddii aadan rabin in qaar ka mid ah. Tubada on "OK" iyo barnaamijka bilaabi doonaa geeddi-socodka lagu soo daabicida mid qalab si kale
Hadda xiro qalabka la your computer cusub oo la isticmaalayo cable UB ah oo aan bilowno TunesGo. Aad Mind computer cusub waa in ay leedahay software tan hore lagu rakibay. Software ayaa lagu ogaan doonaa qalab aad dibadda iyo si toos ah u muujin on furmo suuqa ugu weyn.
Dooro heesaha, video, sawiro ama wax files oo aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan oo la doorto ikhtiyaarka "Dhoofinta," inaad halkan ka saarro korkooda nuqul karaa in aad PC ama maktabadda Lugood.
Marka hore aad leedahay si aad u furtid app Lugood ku computer ugu muhiimsan ee aad. Hadda abuuro playlist ah oo ka mid ah files audio aad rabto in aad CD.
In la abuuro playlist a dhawaan lahayd inaad u dedeg tab playlists sare ee suuqa kala Lugood ah. Riix icon Plus qaybta hoose dhinaca bidix, taas oo macnaheedu yahay dari. Dooro ikhtiyaarka ah playlist cusub. Magaca aad playlist iyo bilowdo jiidayeen heeso ama albums si aad u playlist ah.
Gubasho Disk ah
Marka aad la sameeyo iyadoo talaabada ugu sheegnay, garaac "gabagabeeyay," ka dibna falgali soo Gudbiyay oo guji Guba playlist in disk.
Tani waxay keeni doontaa in aad fool ka fool leh suuqa kala magacaabo goobaha Gubashada. Dooro gubi disk hadda
Waxaad dooran kartaa xawaaraha oo aad u baahan tahay si ay u gubaan CD ah. Tani waxay go'aamin doona wakhtiga ugu taas oo ay qaadi doonaan gubatay.
Guba aad CD
Geli CD ah oo bannaan ee drive disk ah. Dooro ikhtiyaarka "furan Lugood," gubashadii ayaa ku soo bilowday. Lugood sida caadiga ah waxay muujinaysaa horumarka on sare ee suuqa kala app.
Bedelka Files Iyada CD aad Computer New
Ka dib markii aad CD la gubay waxaa si toos ah saaray doonaa. Geli CD this ee Computer cusub oo nuqul ka files ee folder Lugood.
> Resource > Lugood > jidadkiisa oo dhammu ay u gudbiyaan Lugood in Computer kale